?Haddii ay xiranto dekedda Kismaayo mujaahidiintu waxay qanimo u raadsan doonaan dalka Kenya? Abu-mansuur. – Radio Daljir
Muqdisho, Oct, 27 – Afhayeenkii hore ee ururka Al-shabaab Mukhtaar Roobow ?Abu-mansuur? ayaa sheegay inay weerari doonaan dalka Kenya haddii aysan deg-deg ciidamadeeda ugala bixin dalka Soomaaliya. Isagoo ka hadlayey banaanbax weyn oo ka dhacay deegaanka Ceela-biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho oo looga soo horjeeday giltaanka ciidamada Kenya ee dalka Soomaaliya ayuu intaas ku daray in la isu diyaariyo dagaal weyn oo ka dhan dawladda Kenya.
Waxa uu sheegay in haddii ay xiranto dekedda Kismaayo halka ay Shabaabku dhaqaalaha ama qanimada u doonayaan ay tahay dalka Kenya oo dhawaanahan ciidamadiisu ay dagaal ka dhan ah Al-shabaab ka wadeen gobollada Jubbooyinka. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay Xassan Daahir Aweys oo dhawaan ku biiray Al-shabaab ka dib markii ay Shabaabku burburiyeen ururkii uu madaxda ka ahaa ee Xisbul-islaam.
Banaanbaxa ayaa sidoo kale maanta ka dhacay deegaanno badan oo ka mid ah gobolada ay Shabaabku maamulaan ee Koonfurta Soomaaliya, waxaana mas?uuliyiinta Shabaabka ee mudaharaadyadaasi ka qeybgalay ay dadka ku boorriyeen inay ka qeyb qaataan dagaalka ay la galayaan dawladda Kenya.
Dawladda Kenya ayaa aaminsan inay Al-shabaab ay ka dambeeyeen afduubyo iyo dilal taxane ahaa oo ka dhacayey deeganada xuduudda la leh Soomaaliya ee dalkeeda, kuwaas oo qaar loo geystay dad ajaaniib ah oo dalxiis u yimid dalka Kenya.